Tag: fikarohana boribory | Martech Zone
Tag: fikarohana faribolana
Ireo endrika atiny B4B 2 mahomby indrindra?
Alatsinainy, Jolay 6, 2015 Douglas Karr
Tsy gaga izahay ny valin'ny Report Marketing Benchmarking momba ny Content 2015. Saika nifantoka tanteraka tamin'ny fampitomboana ny tsena, ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary ny fanatsarana ny fanovana eo amin'ny manampahefana atolotray ho an'ny mpanjifanay izahay. Ny endrika atiny avo indrindra amin'ny varotra B2B dia: Fandalinana tranga - ankoatry ny fampiroboroboana ny marikao, ny fanadihadiana dia manome fomba mahomby amin'ny fitantarana tantara iray momba ny mpanjifa izay hisoratra anarana amin'ny vina hafa
Ny fiankinan'ny fahombiazan'ny varotra B2B amin'ny orinasa manontolo
Alatsinainy, 15 Jona, 2015 Alahady, Jona 14, 2015 Douglas Karr
Inona no resipeo momba ny fahombiazan'ny varotra nomerika B2B? Ny tatitra 2015 What Works Where dia misy dikany ny tontolon'ny nomerika multichannel ankehitriny. Miara-miasa amin'ny The Marketing Society and Circle Research, Omobono dia nanadihady ireo tompon'andraikitra ambony 331, any Etazonia sy UK, manerana ny Marketing, Sales, Customer Service, HR ary ny fifandraisana anatiny mba hahatakarana tsara ny tanjon'izy ireo, ny tetibola, ny hetsika ary ny paikady / fanamby. Ireto ny fangaro izay omen'i Onobono hahombiazana amin'izany: ny filan'ny marika ny fananganana dia an'ny olon-drehetra izao